Wednesday July 15, 2020 - 11:53:56 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya mandiqadda ayaa sheegaya in ugu yaraan 12 askari ay dhinteen tobanaan kalane ay dhaawacyo soo gaareen kadib markii uu dagaal toos ah dhaxmaray ciidamada labada dowladood.
Wasaaradda difaaca Azerbaijan waxay sheegtay in dagaalka lagu dilay 7 kamid ah ciidamadeeda oo mid kamida uu ahaa Jeneraal sare, dagaalladan oo socda maalintii sedaxaad oo xiriir ah ayaa lafilayaa in ay ku lug lahaato dowladda Turkiga.
Mas'uul u hadlay wasiirka difaaca Azerbaijan ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada Armenia ay weerar daandaansi ah kusoo qaadeen deegaanka Taafuush ee xuduudda kulaala kadibna ay duqeeyeen saldhigyo ciidan iyo tuulooyin.
labadan dowladood ayaa isku eedaynaya in midba midka kale uu kusoo xadgudubay waxayna labadoodu horay uga tirsanaayeen dowladdii la oran jiray midowgii suufiyeeti.
Madaxweynaha turkiga Rajeb Dayib Erdogaan oo kalimad ka jeediyay telefeshinka afka dowladda ku hadla ayaa sheegay in ay difaacayaan dhulka Azerbaijan isagoo armeeniya ku eedeeyay xadgudub iyo daandaansi.
"waxaan cambaaraynayaa xadgudubka ka imaanaya armeeniya waxaana adkeynayaa inT uu ka qeyb qaadanayo difaacidda xuquuqda dhulka Azerbaijan" sidaas waxaa yiri erdogaan hoggaamiyaha dowladda dabadhilifka Turkiga.
Waxa loogu yeero Q.midoobay ayaa walaac ka muujisay in dagaalka labadan dowladood ka dhax qarxay uu isku bedelo mid weyn oo lamid ah dagaallo lagu hoobtay oo tobanaan sano ka hor ah sidaan uga dhacay mandiqadda Naaquush halkaas oo tobanaan kun oo ruux lagu dilay.